सत्तागन्धले बतासिएका प्रचण्ड : धमलासँगको अन्तर्वार्तामा कसरी भए छताछुल्ल? « AayoMail
प्रचण्डको जवाफ : अब त्यो त, त्यो…
पार्टी त फुटिसक्यो भनिराछु म। फेरि यो कुरा…
धमला : त्यसोभए संयुक्त सरकार बन्छ? तीन पार्टीको सरकार बन्छ भन्नेमा तपाईं…?
नेपाली भाषामा विज्ञापन अनुवाद गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिएपछि यो विषय चर्चामा आएको थिए। यसलाई भुपू परिवार नामक फेसबुक पेजले सेयर
के झलनाथ खनाल मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न गएका हुन्? यसो भन्छन्…
लामो समयदेखि खनालको स्वास्थ्य हेरिहेका चिकित्सकका अनुसार उनमा मृगौलाको समस्याबाट हुने लक्षण र पोस्टकोभिडका समस्या देखिएका छन्।
सिन्धुपाल्चोकले पटकपटक वर्षेनीजसो विपत्तिका घटना बेहोर्दै आएको छ। भूकम्प होस् या बाढी पहिरो वर्षेनी हुने प्राकृतिक विपत्तिका कारण सयौंले ज्यान
‘कोरोनाको मात्रै होइन। अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि भ्याक्सिनले यस्तो प्रतिक्रिया देखाएका छैनन्। खोप लगाएकै कारण फलाम टाँसियो भन्नु गतल हो,’